“Waan ku guuleysan karaa Ballon d’Or” – Vinícius Jr – Gool FM
(Madrid) 10 Dis 2021. Ciyaaryahanka reer Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Vinicius Junior, ayaa sheegay inuu ku guuleysan karo abaal-marinta Ballon d’Or ee ciyaaryahanka ugu fiican adduunka, haddii uu ku sii ciyaaro heerka uu hadda joogo xilliyada soo socda.
Vinícius Jr ayaa soo galay liiska musharixiinta abaal-marinta Ballon d’Or 2021, kaasoo uu ku guuleystay Lionel Messi, waxaana uu xiddiga reer Brazil aaminsan yahay inuu si adag u shaqeeyo si uu uga soo muuqdo sida ugu fiican ugana macquulsan garoonka dhexdiisa.
Ciyaaryahanka kooxda Real ayaa u sheegay wargeyska Marca ee dalka Spain.
“Waa inaan ku shaqeeyaa awoodeyda oo dhan si aan u sii wado heerkan, islamarkaana aan sii joogo Real Madrid si aan u sameeyo waxyaabo fiican sida ugu macquulsan.”
“Hadii aan ku guulaysto in aan ku sii socdo heerkan, dabcan waan ku guulaysan karaa Ballon d’Or, laakiin waxa iigu muhiimsan ayaa ah guusha kooxda iyo inaan koobab badan la qaado Real Madrid.” ayuu yiri Vinícius Jr.
Bojan oo fariin u diray kooxdiisii hore ee Barcelona kaddib markii laga soo ciribtiray Champions League